बागलुङ । पाँच वर्ष दक्षिण कोरिया बसेर गाउँ फर्किएका बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–५ बिनामारेका मधु पौडेल अहिले बोलेरो जीप चलाउँछन् । विदेश जानुअघि देशमै सिकेको शीपले उनलाई काममा सघाएको छ ।
पाँचवर्षे करार अवधि भ्याएर घर फर्किएका उनी फेरि विदेश फर्किन चाहेनन् । अहिले उनले यातायात व्यवसायमा हात हालेका छन् । जैमिनीकै राङखानीका बोमबहादुर विकले विदेशमा कमाएको पैसा फर्निचर उद्योगमा लगानी गरेका छन् । विभिन्न देश गरी लामो समय विदेश बसेका विकले राङखानीकै व्याडथलामा फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । मलेशिया, साउदीदेखि कोरियामा मात्र १० वर्ष बिताउँदा नमरेको पैसा कमाउने धित मार्न उनले गाउँमै लगानी गरेका छन् ।
विदेशमा कमाएको धेरथोर पैसा साना व्यवसायमा लगानी गर्दा निरन्तर आम्दानी र अन्यलाई रोजगारीसमेत हुने उनको बुझाइ छ । उनको उद्योगमा पलङ, कुर्ची, टेबल, झ्यालढोकालगायत काठका सामग्री निर्माण गरिन्छ । यसबाट बाहिरी बजारमा जाने गाउँको पैसा गाउँमै रोकिएको उनी बताउँछन् । उद्योगमा रू. ५० लाख लगानी गरेको उनको भनाइ छ । लगानी नगरी प्रतिफल नआउने भन्दै उनले कमाएको पैसा यत्तिकै राख्दा कुनै फाइदा नहुने बताए । फर्निचर उद्योगमा उनको परिवार र गाउँका केही युवाले समेत काम पाएका छन् ।
‘मैले ४०–५० लाख लगानी गर्दा घरपरिवार र छिमेकीलाई समेत काम पुगेको छ,’ उनले भने । उनले विदेशका मानिसको व्यवसायप्रतिको मोह देखेर आफूले पनि सानो व्यवसाय थालेको बताए ।
जैमिनी–१० राङखानीका यम पुन दुबईबाट फर्किएका हुन् । दुबईमा उनको काम र दाम धेरै राम्रो थियो । तर ११ वर्षको दुबई बसाइ सकेर उनी गाउँघरमै व्यवसायमा लागेकाा छन् । दुबईमा कमाएको पैसा लगानी गरेर कुश्मीशेरा बजारमा उनले ‘जैमिनी कृषि तथा पशुपक्षी फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर तथा ब्लक उद्योग’ सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
विदेशको सिकाइ र भोगाइलाई साना व्यवसायमा लगाउने योजना बनाएका पुनले ब्लक उत्पादनदेखि पक्षीको फार्मसम्मका लागि रू. ५० लाख लगानी गरेका छन् । ‘ठूलो योजना बनाएर कामको थालनी गरेका छौं,’ पुनले भने, ‘ब्लक उद्योगबाट शुरू गरेका छौं । उद्योगबाट दैनिक ५०० ब्लक निर्माण हुनेछ ।’ यसैगरी उनले बंगुरपालन पनि शुरू गरेका छन् । बंगुरपालनसँगै कुखुरा, टर्की, बट्टाइ, कडकनाथ र माछापालन गर्ने लक्ष्यसाथ अहिले काम शुरू गरिएको छ । ‘आफ्नै ठाउँमा गरे हुन्छ भन्ने सन्देश दिने इच्छा छ,’ उनले भने, ‘विदेशमा दुःखले कमाएको स्वदेशमा लगानी गरेर रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य छ ।’
जैमिनीमा विदेशमा कमाएर गाउँघरमा लगानी गर्ने युवाको संख्या उल्लेख्य छ । पशुपालन, व्यापार, व्यावसायिक केराखेती, मौरीपालन र साना उद्योग सञ्चालनमा युवाले लगानी बढाएका छन् । यद्यपि आपूmहरूको सक्रियताअनुसारको साथ स्थानीय सरकारले नदिएको गुनासो उनीहरूको छ । रासस